၁။ ကျောက်မဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အချင်းချင်း တိုက်ပွဲကြား အရပ်သား ၅ဦးသေဆုံး၊ ၃ဦးဒဏ်ရာရ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင်းရှိ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် နှင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) တို့ တိုက်ပွဲကြောင့် အရပ်သား(၅) ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ဒုတိယပတ်မှ စတင်ပြီး ယနေ့ထိ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ တင်းမာနေပြီး ဒေသခံ (၅) ဦး သေဆုံးပြီး (၃) ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ကျောက်မဲ ပရဟိတကူညီပေးနေသူများက ပြောသည်။“စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ နဲ့ RCSS/SSA တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ အဲ့တိုက်ပွဲကြောင့် အမျိုးသား (၃)ဦး နဲ့ အမျိုးသမီး (၂)ဦးသေတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကတော့ ၃ဦးရှိတယ်” ဟု ကျောက်မဲ ပရဟိတကူညီပေးနေသည့် အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦး ကပြောသည်။ အဆိုပါ တိုက်ပွဲကြောင့် သေဆုံးသူ ၅ ဦးသေဆုံးသူမှာ အမျိုးသား (၃) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၂) ဦးဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမှာ အမျိုးသား (၁) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၂) ဦး တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိချိန်ထိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းစစ်ရေး တင်းမာနေသေးသည့်အတွက် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ မိမိ နေရပ်သို့ ပြန်ရန် ခက်ခဲနေသေးကြောင်း၊ စစ်ရှောင်အတွက် အရေးပေါ် စားနိပ်ရိက္ခာလည်း လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲခရိုင်အတွင်း နမ္မမြို့နယ်အတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်း ဖြစ်ပွား သည့် တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ရှောင် (၁၀၀၀) နီးပါး ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ လက်ရှိချိန်ထိ နှစ်ဖက်တပ် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွာနေသေးသဖြင့် စစ်ရှောင်များ နေရပ်သို့ မပြန်နိုင်သေးကြောင်း စစ်ရှောင် ကော်မတီ က ပြောဆိုလိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/21547
၂။ မိုးညှင်းမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းများကို စစ်တပ် ဝင်ရှာဖွေ
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းများကို မသင်္ကာမှု ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စစ်တပ်က ဝင်ရောက် ရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ ဧပြီ ၃ ရက်က မိုးညှင်းမြို့ရှိ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်၏ ဘုရားကျောင်း၊ ရိုမန်ကက်သလစ် အသင်းတော်၏ ဘုရားကျောင်းဝန်း၊ အင်္ဂလိကန်အသင်းတော်၏ ဘုရားကျောင်းဝန်း ကိုလည်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ လက် အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များက ဝင်ရောက် ရှာဖွေခဲ့သည်။
မိုးညှင်းမြို့ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) မှ သင်းအုပ်ဆရာ Rev. အောင်ဆိုင်းက “သူတို့က ရိုးရိုးဝင်ရှာတာ တောင် မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းဘေးဘက်လေးတန် အကုန်လုံခြုံရေး အပြည့်ယူတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲက အဆောက်အဦး အားလုံးကို ခြံစည်းရိုးကျော်ဝင်တယ်။ ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးပေါက်ကနေတော့ အရာရှိဆိုသူကဝင်လာတယ်။ ဝင်လာပြီး ဘာမှ မမေးဘဲ သင်းအုပ်ဆရာရဲ့မီးဖိုချောင်၊ အိမ် အကုန်ဝင်ရှာတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ စစ်သားများ ဝင်လာရာတွင်လည်း ဘာသာရေး ဆရာများကို တစုံတခု ပြောဆိုခြင်း မရှိဘဲ စီးနင်းရှာဖွေပြီး မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရှာဖွေသည်လဲဟု မေးမြန်းမှသာ ဆန္ဒပြရာတွင် အလံကိုင်အဖြစ် ပါဝင်သူကို ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှိသည်ဟု သတင်း အတိအကျ ရရှိထားခြင်း၊ သင်းအုပ်ဆရာတဦး အကြောင်းကိုလည်း သတင်းရရှိထားခြင်းတို့ကြောင့် ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါသည် ဟု ပြန်ပြောကြောင်း သိရသည်။
Rev. အောင်ဆိုင်းက “ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ မြေနေရာက ဓမ္မတရားကို ဝေငှပေးတဲ့ နေရာပါ။ မသင်္ကာလို့ ဝင်ရှာမယ် ဆို ရင်တောင် ဒီမှာရှိတဲ့ တာဝန်ခံ၊ သင်းအုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်၊ ခြံဝင်းထဲက သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဝင်ရမှာပါ။အခုက စစ်ဆင်ရေး ပုံစံနဲ့ ဝိုင်းပြီး လက်နက်တကားကားနဲ့ ဝင်ရှာတာက အင်မတန်မှ မဖြစ်သင့်တဲ့ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာမို့ ကျနော်က ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ ပါတယ်။ ဘာသာရေးမြေနေရာတောင် ဒီလိုလုပ်တာ သာမန်ပြည်သူတွေ အိမ်ဆို ပြောစရာ မရှိတော့ဘူး။ အင်မတန် ကို မလုံခြုံနိုင်တော့ဘူး”ဟု ဆိုသည်။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားသည်နှင့် ပတ်သက်၍ KBC က အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်မခံကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး တရားမျှတသည့်နိုင်ငံ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်ရန် နေ့စဉ် ဝတ်ပြုဆုတောင်း မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/05/240400.html
၃။ လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း KIA နှင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တိုက်ပွဲဖြစ်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ် မိုင်းယော်တိုက်နယ် ပန်ခါးကျေးရွာအနီးတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဧပြီ (၄) ရက် နေ့လည် (၁၂) နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပန်ခါးကျေးရွာသား (၂) ဦးကိုလည်း စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ဒေသခံများ ပြောပြချက် အရသိရသည်။
ဖမ်းခံရသည့် ရွာသား ၂ ဦးမှာ ရွာသူကြီး တစ်ဦး နှင့် ဒေသခံ ရွာသား တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းမြောက် လားရှိုးအခြေစိုက် ရွှေဖီမြေသတင်းဌာန တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။“နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲဖြစ်တာ ဟုတ်ပါတယ်။ ရွာသား ဖမ်းခေါ်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မကြားရသေးပါဘူး။”ဟု မိုင်းယော်ဒေသခံ တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
မိုင်းယော်တိုက်နယ်တွင် ကချင်လွှတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA)၊ တအောင်းပလောင် လွှတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) ၊ ကိုးကန့် တပ်တော် (MNDAA) ၊ ရခိုင်တပ်မတော် ( AA) နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSPP/SSA) တို့ အကြမ်းဖက်ကောင်စီ တပ်မ (၈၈) ၊ (၉၉) နှင့် စကခ (၁၁) တို့ လှုပ်ရှားကြကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/21539
၄။ CRPH ပဋိဉာဉ်စာတမ်းကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်အဖြစ် PPST ကြိုဆို
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST က ဘုံသဘောထားရပ်တည်ချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ၏ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိဉာဉ်စာတမ်းကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက် ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ကြိုဆိုကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၃ နှင့် ၄ ရက်နေ့များက PPST အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် သဘောထားထုတ်ပြန်ရာတွင် လက်နက်မဲ့ ပြည်သူလူထုအား စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား သူများအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးအပါအဝင် CDM လူထု လှုပ်ရှားမှုအား ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီ၍ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း CRPH ၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိဉာဉ်စာတမ်း (Federal Democracy Charter) ကြေညာချက်ကို ကြိုဆိုကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
PPST ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျန်မုန်းဆာခေါင်က “ PPST မှာ အဖွဲ့ ၁၀ ပါပါတယ် အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ရဲ့အနေ အထားတွေက မတူပါဘူး အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ တစ်ခါထဲနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီတဲ့အဆင့်မှာပဲ CRPH နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ရသေးတယ် ပူးပေါင်းတဲ့အဆင့်ထိ ကျနော်တို့ကလုပ်ဖို့ တချို့အဖွဲ့အစည်းမှာ တော်တော်လေးအခက် အခဲရှိနေပါတယ် ကျနော်တို့ PPST အဖွဲ့အတွင်းမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ Conscience (အသိတရား) နဲ့သွားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အားလုံးလိုက်ပါနိုင်တဲ့အနေအထား ကျနော်တို့က စကားလုံးတွေကို သတိကြီးစွာနဲ့ ကြိုဆိုတယ်အဆင့်ပဲ ပါပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST အဖွဲ့တွင် NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသော ရှမ်းပြည်ပြန် လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS, ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU, ဒီမုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်အမျိုးသားတပ်မတော် DKBA၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU/KNLA-PC ၊ ချင်းအမျိုသားတပ်ဦး CNF, ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP, ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF, မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ၁၀ ဖွဲ့တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ http://burmese.mon news.org/2021/04/06/crph-%e1%80%95%e1%80%8b%e1%80%ad%e1%80%89%
၅။ ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်း ၅ ခု မြန်မာစစ်တပ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိ
ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ မြန်မာ- ထိုင်း နယ်စပ်တလျှောက် ဒုက္ခသည်စခန်း ၅ ခုမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အိုးအိမ်ပြောင်းရွှေ့နေ ထိုင်ရသူ ၆၀၀၀ လောက်ဟာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်မယ့် အန္တရယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ Myanmar Now သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်- ရှမ်းပြည်နယ် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ (SSRC-TB) က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်အရဆိုရင် အဲဒီဒေသတလျှောက်မှာ မြန်မာဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရှိနေတာကြောင့် သတိထားဖို့
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ တာချီလိတ်မြို့နယ် နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီက ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲမှာ ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ မယ်ဆိုင်နယ် စပ်ရေးရာအဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်က နယ်စပ်တလျှောက်မှာ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA) ကို ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ ပြင်ဆင် နေကြောင်း၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေ အတွင်း ထိုင်းမြေပေါ်ကို မြန်မာစစ်တပ် ကျည်မကျရောက်အောင်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က ပေးပို့တဲ့ စာထဲမှာ ဖေါ်ပြထား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ RCSS/SSA အဖွဲ့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်၊ ချင်းရိုင် နဲ့ မယ်ဟောင်ဆောင် ပြည်နယ်တွေ အတွင်းမှာ အခြေစိုက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြည်နယ်တွေထဲမှာ မြန်မာဒုက္ခသည် စခန်း ၅ ခု ရှိနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် စခန်းတွင်း နေထိုင်သူ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ထိုင်းနယ်စပ်- ရှမ်းပြည်နယ် ဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာ ကော်မတီက စိုးရိမ်ကြောင်းပြောပါတယ်။
ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၁၉၉၀ နှစ်တွေကတည်းက ဒီစခန်းတွေမှာ ရောက်ရှိခိုလှုံနေကြ တာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်တုန်းက ရှမ်းပြည်နယ်ထဲကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်က ၃၀,၀၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ မကြာ သေးခင်ကပဲ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ တိုက်လေယာဉ်တွေ Loi Tai Leng ဒုက္ခသည် စခန်းတွေပေါ်မှာ ပျံဝဲနေတာတွေ့ရပြီး လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်လာရင် ပြေးစရာ မြေမရှိတဲ့ အတွက် ဒုက္ခသည်တွေ စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ ကော်မတီက ပြောပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/myanmar-thai-border-air-arrack-shan-displace-/5842215.html
၆။ ကျောက်မဲမြို့ အေရှဝေါလ်တိုးဂိတ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ် ကျောက်မဲမြို့နယ်ရှိ အေရှဝေါလ် တိုးဂိတ်မှာ ဧပြီ ၅ ရက် ဒီနေ့ ည ၇ နာရီလောက်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ထိခိုက်ပျက်စီး ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေထံက သိရပါတယ်။
လက်နက်ကြီးထိမှန်တာလား မိုင်းခွဲခံရတာလား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေမဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တိုးဂိတ်ဝန်ထမ်းတချို့လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်တဦးတည်းရဲ့ ကား ၂ စီး လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီး ကားမောင်းသမားတွကတော့ ဒဏ်ရာ မစိုးရိမ်ရပေမယ့် တယောက်ကတော့ ပြင်ဦးလွင် ဆေးရုံကိုပို့ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၁၂ ဘီးတစ်စီး မီးလောင်သွားသလို ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အစအန မှန်ပြီး လေကာမှန်ကွဲသွားတဲ့ ကားက ၁၅ စီး လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ အရေအတွက်နဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ပမာဏကို လတ်တလော မသိရသေးပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/456269
၇။ ဝင်းရော်ဒေသအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်များ ပိုမိုလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဒေသခံများ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေရ
ကေအဲန်ယူ-ဒူးပလာယာခရိုင်၊ ဝင်းရေးမြို့နယ်(ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်)၊ ဝင်းရော်ဒေသအတွင်း စစ်ကောင်စီလက် အောက်ခံတပ်များက ယမန်နေ့( ဧပြီ ၅ရက်)မှစကာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားပိုမိုလုပ်ဆောင်လာသောကြောင့် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွား လာမည်ကို ဒေသခံများ စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ဝင်းရေးဒေသခံတစ်ဦးက “ညက စစ်သားတွေအများကြီး တက် လာတယ်။ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်လာမှာစိုးတယ်။ လူထုတွေ စိုးရိမ်ပြီးတော့ ထိတ်လန့်မှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ တောမှာက တစ်ဖွဲ့၊ ရွာမှာက တစ်ဖွဲ့ အင်အားတော်တော်များတယ်။ အခုကတော့ လူထုတွေက အရမ်းစိုးရိမ်တဲ့အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူ ဒူးပလာယာခရိုင်၏ ယနေ့ဧပြီ ၆ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဝင်းရေးမြို့နယ် KNLA( ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်) တပ်ရင်း ၁၆ နယ်မြေအတွင်း ယမန်နေ့(ဧပြီ ၅) ည( ရး၃၀)အချိန်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု လက်အောက်ခံ လေးဖထောကျေးရွာ ဘုရားတောင်ယာယီ တပ်စခန်း(ခလရ-၂၈၄)တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူး ရန်နိုင်ဦး ဦးဆောင်ပြီး ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ် နဂါးတောင်ရှိ လက်နက်ကြီး သွားရောက်ယူခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ည(၁၀း၁၀)အချိန်တွင် (ခလရ-၂၈၃)တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူး မျိုးထိုက်နောင်နှင့် BGF ဗိုလ်မှူး မန်းဝင်းယုံ ဦးဆောင်ပြီး အင်အား ခန့်မှန်း(၄၅)ဦးသည် ပြည်သူ့ မှန်လုံကား(၃)စီးဖြင့် တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ ရဲစခန်းတွင် အင်အားဖြည့်စွက်ပြီး စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ http://kicnews.org/2021/04/%e1%80%9d%e1%80%84%e1% 80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%
၈။ ကျောက်တော်တွင် စစ်ကျန်ဗုံးသီး ပေါက်ကွဲ မိသားစုဝင် ၃ ဦး သေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် ရွှေပြည်ကျေးရွာတွင် ဧပြီလ ၄ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီ အချိန်ခန့်က စစ်ကျန်လက်နက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သည့်အတွက် မိသားစုဝင် ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူများမှာ မိခင်ဖြစ်သူ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ဒေါ်အေးအေးသိန်း၊ သားဖြစ်သူ အသက် ၅ နှစ်အရွယ် မောင်အောင်ကိုလင်းနှင့် အသက်၂ နှစ်အရွယ် မောင်ကျော်ဆန်းဝင်းတို့ ဖြစ်ကာ သားကြီး မောင်ဝေယံလင်းမှာ လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရွှေပြည်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းအေးမောင်က ပြောသည်။ ၎င်းက “သူတို့ မိသားစုဝင်တွေ ပြောပြချက်အရတော့ အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုပြီး ခြံဝင်းထဲမှာ အမှိုက်တွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ကလေးတွေ ဗုံးသီးတလုံးကို ကောက်ယူပြီးတော့ အားလုံး ဝိုင်းကြည့်ကြတဲ့အခါ ပေါက်ကွဲတာလို့ ပြောတယ်။ ဗုံးသီး က အပြင်က ကောက်ရလာတာလား ။ အဲဒီ ခြံထဲမှာပဲတွေ့ပြီး ကိုင်ကစားကြည့်တာလားဆိုတာတော့ သေချာမသိဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရခိုင် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး (Rakhine Ethnics Congress) ၏ ကောက်ခံထားသော စာရင်းအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှနေ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲ ကာလအတွင်း မြေမြှုပ်မိုင်း အပါအဝင် စစ်ကျန် လက်နက်ခဲယမ်းများ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၃ ဦး ရှိပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ ၆၇ ဦး ရှိကြောင်း သိရ သည်။ တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်စစ်တပ် (AA) တို့ သုံးနှစ်နီးပါးကြာ တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ ကျေးရွာသား သိန်းနှင့်ချီ နေရပ်မပြန် နိုင်သေးဘဲ လက်ရှိအချိန်အထိ စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် ဝင်ရောက် ခိုလှုံနေကြသည်။ မိုင်းရှင်းရေးများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် စစ်ရှောင်များ နေရပ်ပြန်ရန် စစ်ကောင်စီက တိုက်တွန်းနေသော် လည်း ကျေးရွာသားများက ကျေးရွာအနီး၌ တပ်မတော်သားများ တပ်စွဲနေထိုင်ခြင်းနှင့် မိုင်းအန္တရာယ် ရှိနေသည့်အတွက် နေရပ်သို့ မပြန်ရဲသေးကြကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြေကြားထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/04/05/24039 4.html\_
၉။ နမ္မတူမြို့နယ် ပန်လုံရွာတွင် တိုက်ပွဲအတွင်း အိမ် ၂၈ အိမ် မီးလောင်ပျက်စီး
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် ပန်လုံကျေရွာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နေအိမ် (၂၈) လုံးမီးလောင်သွားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ နမ္မတူမြို့နယ် ပန်လုံကျေးရွာတွင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့ နှင့် RCSS တိုက်ပွဲပြင်းထန်းမှုကြောင့် မတ်လ ( ၂၉ ) ရက် တွင်နေအိမ် (၁၂ )လုံးမီးလောင်သွားပြီး ဧပြီ (၄) ရက်နေ့တွင် (၁၆) လုံးမီးလောင်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“ ၂၈ အိမ်လောက် မီးလောင်သွားတာ။ လက်နက်ကြီးတွေကျတယ်။ ဘယ်သူပစ်လဲတော့ မသိသေးဘူး ” ဟု ပန်လုံကျေး ရွာဒေသခံ အမျိုးသား တဦးကပြောသည်။ တိုက်ပွဲကြောင့် လက်နက်ကြီးများ အိမ်ပေါ်သို့ကျသဖြင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရသိရသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ မီးလောင်သွားသည် အိမ်များကို အိမ်ပိုင်ရှင်များ က သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိရသေးသဖြင့် ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးကို မသိရှိရသေးပေ။ “ အိမ်တွေမီးလောင်သွားတာ အိမ်ပိုင်ရှင် တွေက အကုန်မသိသေးဘူး။ သိတဲ့သူတွေကလည်း လာမကြည့်ရသေးဘူး။ ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွား တာလည်း ဆိုတာကို အသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။ အဲ့ရွာကလူတွေ အကုန်းလုံးက ရှောင်းတိမ်နေ ရတယ်လေ” ဟု ဒေသခံတစ်ဦး ကပြော သည်။
နမ္မတူမြို့နယ်တွင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ နှင့် RCSS/SSA တို့တိုက်ပွဲသည် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ စစ်ရေးတင်မားနေကြောင်း ဒေသခံကပြောသည်။ အလားတူ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာတွင်းသို့ ဗုံးကြီးကျရောက်ခဲ့သောကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဗုံးစထိမှန်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ လာရှိုးဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရ ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/21556
၁၀။ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း၌ နေအိမ်တစ်ထောင်ကျော် ပျက်စီးမှုဖြစ်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်လ ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်မှု ကြောင့် လူနေအိမ် တစ်ထောင်ကျော် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း စခန်း တာဝန်ရှိသူများ ပြောပြသည့် စာရင်းများအရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီ ကျော်တွင် ကျရောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မိုးသက်လေပြင်း တိုက်ခတ် မှုကြောင့် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း၏ ရပ်ကွက်တချို့၌ လူနေအိမ်အပါအဝင် အဆောက်အဦး ပေါင်း ၁,၃၃၂ လုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း စခန်းဥက္ကဋ္ဌ စောအောနက်က ယခုလိုပြောသည်။“ရပ်ကွက် (A)က ၁၇ လုံး၊ ရပ်ကွက် (B) က ၇၁၂ လုံး ရပ်ကွက် (C) က (၅၆၅) လုံးလောက်ရှိတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒါကအားလုံးပေါင်းထားတာ။ ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာ အမိုးပျက်စီး တာ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ပျက်စီးမှုဖြစ်တာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးတာတွေပါတယ်။ စုစုပေါင်းလိုက်ရင် ၁,၃၃၂ လုံးရှိတာပေါ့”ဟု ၎င်းက ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။ အဆိုပါ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည့် လူနေအိမ်များအတွက် လတ်တလောတွင် အစားထိုး ကူညီပေးနိုင်ရန် စခန်းတွင်း တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကူညီထောက်ပံ့သူများက ဆွေးနွေးထားကြပြီး လာမည့် ဧပြီလ ၆ ရက် (နံနက်ဖြန်)မှစ၍ အစားထိုး ကူညီထောက်ပံ့မှုများ စတင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု စောအောနက်က ဆက်ပြောသည်။
၎င်းလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူအနည်းငယ် ထိခိုက်မှုရှိသော်လည်း စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထားတွင် မရှိကြောင်းနှင့် အလားတူပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည့် ဘုရားကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း အဆောက်အဦးအမိုးအကာများ အတွက် လည်း ရပ်ကွက်နေ လူထုများမှ ပြန်လည်ဝိုင်းဝန်း ပြုပြင်သွားမည်ဟု စခန်းတွင်းနေထိုင်သူများက ဆိုသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့၏ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၆၀ အကွာအဝေးတွင်ရှိ မယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် လူဦးရေ ၄ ခန့် နေထိုင်ကြ သည်။ http://kicnews.org/2021/04/%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%84%
၁၁။ မွန်ပြည်နယ်တွင် ရဲနှင့် စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈ ဦးထိ ရှိလာ
မွန်ပြည်နယ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှ ဧပြီ ၆ ရက်အထိ အကြမ်းဖက် စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူ ၈ ဦးအထိ ရှိလာပါတယ်။
ကျဆုံးသူ ၈ ဦးအထဲမှာ ၄ ဦးဟာ သေနတ်ကျည်ဆန် ဦးခေါင်းထိမှန် သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကျန် ၄ ဦးကတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ လည်ပင်းထိမှန် သေဆုံးခဲ့တာပါ။ ထူးခြားမှုအနေနဲ့ သေဆုံးသူ ၈ ဦးမှာ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး ပါဝင်ပြီး ကျန် ၇ ဦးကတော့ အမျိုးသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့နယ်အလိုက် ကျဆုံးမှုမှာတော့ မော်လမြိုင်မြို့နယ်က ၅ ဦး ၊ သထုံ၊ ပေါင်နဲ့ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ၁ ဦးစီ ၊ စုစုပေါင်း ၈ ဦးကျဆုံးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျဆုံးသူ ၈ ဦးမှာတော့ အသက်အကြီးဆုံးအဖြစ် ၅၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးသာ ပါဝင်ပြီး ကျန် ၇ ဦးကတော့ လူငယ်တွေပဲ ဖြစ်နေတာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/456358
၁၂။ စစ်ရှောင်များကို ကူညီမည့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို တစ်ကြိမ်စာ သယ်ဆောင်ခွင့်ရ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် သံလွင်မြစ်ကမ်းနံဘေး မဲ့စမ်လက်(သောလယ်ထာ)တွင် သောင်တင်နေသည့် ကရင်စစ်ရှောင်များ အတွက် ကူညီမည့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေခံထိုင်းအာဏာပိုင်များက တစ်ကြိမ်စာ သယ်ဆောင် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဟု သိရသည်။
စစ်ရှောင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦးက “အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ထိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက လာပြီးညှိနှိုင်းလို့ ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။ အထက်က ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဖွင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါစာ သယ်ဆောင်ခွင့် ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အခု လှေပေါ်တင်နေတုန်းပါပဲ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ယခု စစ်ရှောင်အကူအညီအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်မှုသည် ထိုင်းလှူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်သယ်ဆောင်ခွင့်ပြုခြင်းသာဖြစ်ပြီး ထပ်မံပို့ဆောင်မည့် အကူအညီများကို ခရိုင်အဆင့်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ထပ်မံသယ် ဆောင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
မူတြော်ရိုင်မှ စစ်ရှောင်ပြည်သူများအတွက် ပို့ဆောင်မည့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုပစ္စည်းများ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၃ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲ့စရင်းယန်းမြို့နယ် မဲ့စလက်(သောလယ်ထာ)တွင် ရောက်ရှိခဲ့ သော်လည်း ထိုင်းအာဏာပိုင်များဘက်က နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သယ်ဆောင်ခွင့်မပြုသေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ထိုင်းကရင်အဖွဲ့ (KTG) နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဲန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့တို့က ကားအစီးရေ ၂၀ကျော်ဖြင့် တင်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီး အခြေခံ စားသောက်ကုန်များ ဖြစ်သည့် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ခေါက်ဆွဲ ခြောက်၊ သောက်ရေ စသည့် စားသောက်ကုန်များအပြင် အခြားလူ သုံးကုန်ပစ္စည်း များလည်း ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/2021/04/%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9 %e1%80%b1%e1%80%9b%e1%
၁၃။ ရှဒူးဇွပ်အခြေစိုက် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ကျေးရွာများသို့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်
လီဒိုလမ်းမပေါ် ဝါရာဇွပ်ကျေးရွာအုပ်စု ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာတွင်အခြေစိုက်သော အာဏာသိမ်းစစ်တပ် ခလရ (၂၉၇) က တိုက်ပွဲ မဖြစ်သော်လည်း ညအချိန်လက်နက်ကြီးများ ပစ်ခတ်နေမှုကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း လက်နက်ကြီးကျရောက် ပေါက်ကွဲမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီလ ၅ရက်နေ့ ည ၈နာရီခွဲအချိန်တွင် ရှဒူးဇွပ်စစ်တပ်ကုန်းမှ လက်နက်ကြီး ၆ ကြိမ် ထက်မနည်း ပစ်ခတ်မူကြောင့် ဘန်ကောက်ကျေးရွာ နှင့် နမ်ဆိုင်ကျေးရွာတွင် လက်နက်ကြီးတစ်လုံးစီ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“မနေ့ည ၈ နာရီနဲ့ ၉နာရီကြားမှာ ဟုတ်တယ်။ ဒီရှဒူးဇွပ်စစ်တပ်ကုန်းက လက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်နေတယ်။ ဘယ်ကိုပစ်နေကြမလဲ မသိ ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဒီဝါရွာဇွပ်ကျေးရွာနဲ့နီးတဲ့ ဘန်ကောက်ကျေးရွာမှာက လက်နက်ကြီးကျတယ်တယ်လို့ သိရတယ်” ဟု ဝါရာဇွပ်ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီး ကျရောက်ခဲ့သော်လည်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိသူ မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“သူတို့က ညအချိန်ဆို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်နေ​တာဆိုတော့ အရမ်းစိုးရိမ်တယ်။ ဘယ်ကို ပစ်မှန်းလည်းမသိရ။ ဘယ်သူက တာဝန်ယူပေးမလဲ။ ဒါကိုဘဲ စိုးရိမ်နေရတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။ ပြည်သူများကို ပစ်သတ် သော အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA က တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2021/04/06/apr-6-y1/
၁၄။ မော်လမြိုင် မုပွန်ရေတပ်စခန်းက အရာရှိနှင့် တပ်သား ၁၅ ဦး တပ်မှထွက်ပြေး
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ မုပွန်ရေတပ်စခန်းငယ်က ရေတပ်သား အရာရှိ တစ်ယောက်အပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ယောက် တပ်ထဲကနေ ထွက်ပြေးသွားတယ်လို ဒေသခံတွေက အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
ဘာအကြောင်းကြောင့်ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာ မသိရသေးပေမယ့် ယူနီဖောင်းနဲ့ အတူ ထွက်ပြေးသွားတာလို့ စခန်းအနီး ဝန်းကျင်ကဒေသခံတစ်ယောက်က အတည်ပြုပါတယ်။ “စခန်းက စခန်းငယ်လေးပါ။ စစ်သင်္ဘာ တစီးလောက်ပဲ အရင်က တည်းက ကမ်းကပ်သွားလာနေတာ။ လက်နက်တွေ ဘာတွေတော့ မယူသွားဘူးကြားတယ်။ အသေးစိတ်တော့ ကျနော်တို့ လည်း မပြောပြတတ်သေးဘူး။ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်နေလို့” လို့ ဒေသံကပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းကစပြီး မော်လမြိုင်မြိုတွင်း အဲဒီစခန်းအနီးသာမက လမုတန်း တလျှောက် စစ်သားနဲ့ ရဲတွေသွားလာနေသလို ဇေယျာသီရိ မြို့သစ်ဘက်အထိ ဦးတည်သွားလာနေကြောင်း မော်လမြိုင်မြို့ခံ တစ်ယောက်ကလည်း အတည်ပြုပါတယ်။ ရေတပ်သားတွေ ထွက်ပြေးတာကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေ နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း မော်လမြိုင် ဒေသခံတချို့က သုံးသပ် နေကြပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/456352
၁၅။ သျှမ်းရှေ့ တွင် သြစတေးလျ ကုမ္ပဏီ ရွှေတူးဖော်ရန် စီစဉ်နေ
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ရက်စက်မှုကြား သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တွင် သတ္တုတွင်းတူးဖော်သည့် ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ ကို သြစတေးလျ နိုင်ငံသားပိုင်း ကုမ္ပဏီ က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွန်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း SHRF ထုတ်ပြန်ချက် အရသိရသည်။ သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တွင် ရွှေတူးဖော်ရန် အတွက် အကျယ်အဝန်း (၅၄၇) ကီလိုမီတာကို လျားထားကြောင်း ဧပြီ (၁)ရက်တွင် သြစတြေးလျ နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီ တခု ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် မတ် (၈)ရက် တွင်လည်း Access Resources Asia (ARA) ကုမ္ပဏီသည် သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဖြတ်မြို့ ရှိ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ရွှေတူးဖော်ရေးစီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
လက်ရှိကာလသည် မြန်မာနိုင်ငံရေး အခြေအနေသည် ရှုပ်ထွေးနေသည့်ကာလဖြစ်သည့်အလျောက် ARA ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ARA ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လက်ရှိအချိန် ရွှေလာရောက်တူးဖော်မည် ဆိုပါက အာဏာ သိမ်းစစ်အစိုးရကို လက်တွဲချင်သည့် သဘောမျိုး သက်ရောက်ကြောင်း သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင် (SHAF)မှ စိုင်းဟော်ရှဲန် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ ယခုချိန်မှာ လာတူးတာဟာ စစ်တပ်ကို ထောက်ခံတာနဲ့ တူတယ်။ အာဏာသိမ်း အစိုးရနဲ့ လက်တွဲချင်တဲ့သဘောပဲ။ ဒီချိန်က စီးပွားရေး လုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းထဲကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာသင့်ပါတယ်”ဟု စိုင်းဟော်ရှဲန် က ပြောသည်။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်ဖြစ်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာပြည်ကိုလာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခေတ္တရပ်နားစေချင်ကြောင်းလည်း စိုင်းဟော်ရှဲန်က ထပ်လောင်းပြောသည်။
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းပိုင်း ရှိရင်းစွဲ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းမှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု များ ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် သျှမ်းရှေ့ပြည်သူများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြသည်။ ရွှေတူးဖော်မှု ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက တာချီလိတ်ဒေသတွင် တောင်များဖြိုဖျက် ခံရကာ စိုက်ပျိုးမြေယာများ နှင့် ရေကြောရင်းမြစ် များအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဆိပ်သင့်စေခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးသားထားသည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် ၂၀၂၀ တွင်လည်း သဘာဝ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ARA အားမိုင်းဖြတ်တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင် ၃ နှစ် သက်တမ်း ပေးခဲ့သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/21542
၁၆။ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလို့ သေဆုံးရသူတွေ များပြားလာမှု ကုလ သတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး အခုအချိန်အထိ ဆန္ဒပြပြည်သူ ၅၆၈ ယောက် သေဆုံးရပြီ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာ အတော်လေးကို များနေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ “ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် ရေးရုံးက ရခဲ့တဲ့ စိတ်ချရတဲ့သတင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလကနေ ဒီကနေ့အထိဆို အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသားတွေ သေဆုံးရမှုဟာ အနည်းဆုံး ၅၆၈ ယောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဒါဟာ သေဆုံးသူ
အရေအတွက် သိသိသာသာကို များနေတာလို့ ကုလရုံးက သတိပေးလိုက်ကြောင်း ” ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ရုံး ပြောခွင့်ရ Stephane Dujarric က ပြောသွားတာပါ။
အခု သီတင်းပတ်ကုန်မှာပဲ နောက်ထပ်သေဆုံးရသူက ၁၈ ယောက်ရှိခဲ့ တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်ဖြစ် ပွါးနေတာ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း တွေက သတိပေးနေကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့ အရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener မြန်မာပြည်တွင်း သွားရောက်နိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက်တွေက မေးမြန်းရာမှာတော့ သွားနိုင်ဖို့ အခုထိ ကြိုးစားနေဆဲဖြစ် ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပြည်သူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်ဇြိုခွင်းမှုတွေ ချက်ချင်းရပ်ပစ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres ကရော အမေရိကန်နဲ့ အီးယူဥရောပသမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာကပါ တောင်းဆိုနေပေမယ့် စစ်တပ်အာဏာပိုင်ရဲ့ ကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်ရှိနေတာကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ တိုးလာနေသလို အဖမ်းဆီးခံရသူတွေကလည်း အခုဆို ၂၆၀၀ ကျော်ရှိနေတာပါ။ https://burmese.voanews.com/a/myanmar-violence-crack-down-un-warn-/5841673.html
၁၇။ စစ်တွေ ကန်တော်ကြီး ရေခမ်းခြောက်မှု ပြည်နယ်ကောင်စီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြော
စစ်တွေမြို့သူမြို့သားများကို ရေပေးဝေနေသည့် အဝေးပြေးကားဂိတ်အနီးရှိ ကန်တော်ကြီးမှာ အခု လက်ရှိ ရေခမ်းခြောက် နေ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌက သွားရောက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ပြည်နယ်ကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးတာဝန်ခံ ဦးလှသိန်းက ပြောသည်။“ဟိုတလောက ကောင်စီဥက္ကဌ သွားကြည့်တယ်။ ဘယ်လိုအစီ အစဉ် ရှိလဲပေါ့။ ဒါကတော့ နှစ်တိုင်းခမ်းနေတာပဲ၊ ငါတို့လက်ထက်ကတည်းကတည်းက ခမ်းနေတာ၊ ဂျိုက်ကာနဲ့လည်း နောက်ကျ လုပ်ကြဘာညာပြောတယ်။ မနေ့က သလုံးတော်ဓါတ်ကို သွားတော့ သလုံးတော်ဓါတ်ကကြည့်တော့ ကန်ကြီးထဲ က ကန်ငယ်တွေ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝမ်းသာတယ်။ လိပ်တွေ၊ ငါးတွေ နေလို့ရသေးတာပေါ့။ ” ဟု ပြောသည်။
ရပ်ကွက်အမည်မဖော်လိုသည့် စစ်တွေဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးက “ ရေက အလုံအလောက်မရဘူး။ အခုဆိုရင် ရေ အနှောက်တွေပဲလာတယ်။ ရေမသန့်တော့ နွေလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ နေမကောင်းဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်တယ်။ ကျမမှာဆို ကလေးတွေက ငယ်သေးတော့ ရေကြောင့် ရောဂါရမှာကို ကြောက်နေတယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
ဆင်ကူးလမ်းရပ်ကွက်က အမည်မဖော်လိုသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလည်း သူမနေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေလုံးဝမရရှိ ကြောင်းနှင့် ရေကို ယခင်အောင်တံခွန်သင်္ဘောဆိပ်အနီးက မိတ်ဆွေအိမ်တစ်အိမ်မှ အကူအညီတောင်းပြီ ရေခပ်ရကြောင်း ပြောသည်။ စစ်တွေမြို့တွင် ရေလုံးဝမရရှိသည့် ရပ်ကွက်အနည်းဆုံး ၅ ခုထက်မကရှိပြီး ရေရရှိသည့် ရပ်ကွက်ဆိုလျှင်လည်း အိမ်တိုင်းစေ့ မရရှိကြောင်း ဒေသခံများ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ မင်းဂံရပ်ကွက်ဆိုလျှင် ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၉ ခုအထိရှိပြီး အဝီစိရေကို အားကိုးရနေရကာ ကန်တော်ကြီးရေ လုံးဝမရကြောင်း ၅ နှစ်ကြာနေထိုင်လျက်ရှိသည့် မင်းကံရပ်ကွက်နေ
အသက် ၄၅ အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးကပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်မင်း ကို DMG မှ မေးမြန်းရန် ဆက်သွယ်ခဲ့ သော်လည်း အလုပ်မအားသေးဟုဆိုကာ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး တာဝန်ခံ ဦးလှသိန်းကိုပဲ မေးမြန်းရန် ဖြေဆိုခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ကန်တော်ကြီး ရေခမ်းခြောက်နေခြင်းကြောင့် စစ်တွေမြို့က ရပ်ကွက်အချို့မှာ ရေရှားပါးမှုကို ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-80251
၁၈။ မြဝတီမြို့မှ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၁၀၀ ဝန်းကျင်အနက် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်သာ အာမခံပေး ထားပြီး ကျန်သူများကို မြဝတီနှင့် ဖားအံအချုပ်ထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းထား
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် ဖမ်းဆီးခံရသူ လူ ၁၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်အနက်မှ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သူများကိုသာ အာမခံဖြင့် လွှတ်ပေးထားပြီး ကျန်သူများကို မြဝတီနှင့်ဖားအံမြို့ရှိ အချုပ်ထောင်တို့တွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယအပတ်မှစကာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထိ မြဝတီမြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖမ်းဆီးခံရသူ စုစုပေါင်း လူ ၁၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးသူ ကလေးသူငယ် ၁၅ ယောက်ခန့်ကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ခံဝန်ဖြင့် လွှတ်ပေးထားပါတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့ အယောက် (၈၀) ဝန်းကျင်ခန့်ကိုတော့ များသောအားဖြင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရပြီး မြဝတီရဲစခန်း အချုပ်နှင့် ဖားအံမြို့ တောင်က လေးအကျဉ်းထောင်တွေမှာ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေတဆင့် မြဝတီတရားရုံးသို့ ရုံးချိန်းတက်နေရတာပါ။ ”ဟု ဆန္ဒပြမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖမ်းဆီးခံရသူများအား အခမဲ့ ဥပဒေ အကူအညီပေးလျက်ရှိသည့် မြဝတီမြို့ ပြည်သူ့ရှေ့နေများ အဖွဲ့မှ ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့ အာမခံရရှိရေးအတွက် လျှောက်လွှာတင်ထားပြီး တရားသူကြီး၏ အဆုံး အဖြတ်ကို စောင့်နေဆဲဖြစ် ကြောင်း အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီပေးလျက်ရှိသည့် မြဝတီမြို့ ပြည်သူ့ရှေ့နေများ အဖွဲ့ထံမှသိရသည်။ http://kicnews. org/2021/04/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
၁၉။ ဖမ်းဆီးခံနည်းပညာကျောင်းသား ၃ ဦးကို ဗန်းမော်အကျဉ်းထောင်တွင် ခုံဖွဲ့ စစ်ဆေးမည်
မတ် ၂၄ ရက် မနက် ၅ နာရီကျော်လောက်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ အစိုးရနည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၃ ယောက်ကို ဗန်းမော်အကျဉ်းထောင်မှာ ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၅၀၅ -ကနဲ့ စွဲချက်တင်မယ်လို့ သိရှိရပြီး လောလောဆယ် TU (ဗန်းမော်) က တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့ ရှေ့နေအချို့ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက် ဝန်းရံပေးနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု လက်ရှိမှာ ကျောင်းသား ၃ ဦးမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့ သိရှိရပြီး ကျန်တဲ့သူတွေတော့ အခြေအနေ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ဗန်းမော်ခရိုင်မှာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရင်း ကျောင်းသား ၃ ဦး၊ မဇ္စ◌ျိမသတင်းထောက် ၁ ဦးအပါအဝင် အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စာရင်းအတိအကျ မရနိုင်သေးဘဲ့ ရွှေကူမြို့မှ လူငယ်တွေအပါအဝင် တခြားအရပ်ဒေသက လာရောက်လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြသူ အချို့လည်း ပါဝင်ပြီး ကူညီပေးနိုင်မယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://b urmese.dvb.no/archives/456291
၂၀။ ဖားအံမြို့မဘောလုံးကွင်းကို ပြည်သူထံ ပြန်ပေးရန် အဆောက်အဦးများ စတင်ဖြိုချ
ဖားအံမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်း အာဇာနည်ကျောက်တိုင်အနီးရှိ ဖားအံမြို့မဘောလုံးကွင်းကို ပြည်သူလူ ထုလက်ဝယ် ပြန်လည်ပေးအပ်သွားရန်အတွက် ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦးများကို ဧပြီလ ၅ရက်နေ့တွင် စတင် ဖြိုဖျက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း မြို့ခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ အဆိုပါဘောလုံးကွင်းကို ယခင်က မူလအတိုင်း ပြန်ထားရှိ ရန်အတွက် ဘောလုံးကွင်းအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးအကြမ်းများကို သင်္ကြန်မတိုင်မှီ အပြီးဖြိုပေးရန် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ခန့်အပ်လိုက်သည့် ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင် စီက မတ်လ ၃၀ ရက်စွဲနှင့် သမိုင်းဝင်မြို့မဘောလုံးကွင်း ပြည်သူ့လက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုကော်မတီထံ စာပေးပို့သည့်အတွက် အဆိုပါကော်မတီက ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦး အကြမ်းများကို စတင်ဖြိုချနေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မြို့မဘောလုံးကွင်းကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်နယ်ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီးစောခင်စိုး (နဝတ)လက်ထက်ကတည်းက မြဌေး ကြွယ်လင်းကုမ္ပဏီကို နှစ် ၉၀ဂရမ်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားခြင်းရှိသော်လည်း အဆင့်ဆင့် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့ သည်။ ယင်းနောက် နှစ် ၃၀ဂ ရမ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဦးမိုးကျော်(ငွေမိုးကုမ္မဏီ)မှ ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရာ ပြည်သူများ ကန့်ကွက် သည့်အတွက် ၎င်းဆောက်လက်စဟိုတယ်ကို ထိုနှစ်တွင်ပင် ရပ်နားလိုက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရထံ ပြန်လည် အပ်နှံလိုက် သည်ဟု သိရသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး NLD အစိုးရတက်လာသည့် နောက်ပိုင်း အဆိုပါမြေနေရာကို သာသနာ့ဗိမ္ဗာန် အဆောက် အဦးနှင့် မိုးလုံလေလုံ ဖူဆယ်အားကစားရုံကို ကွင်းတစ်ဝက်စီ တည်ဆောက်သွားရန် ပြန်လည်အစားထိုးကာ ခွင့်ပြု ထားခဲ့ သည်။ ဖားအံမြို့မ ဘောလုံးကွင်းကို ၂၀၁၃ခုနှစ်မှစ၍ မူလအတိုင်း ပြည်သူများအတွက် ပြန်လည်ထားရှိပေးရန် ဒေသခံပြည် သူများ၊ ဆရာတော်သံဃာတော်တို့က ၈နှစ်ကျော်ကြာ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2 021/04/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%b6%e1%